သန်းရွှေ | Save Burma
Posts Tagged ‘သန်းရွှေ’
To raise awareness, why not enter the General Than Shwe Poetry Competition and spread the word over here:
The ShadowLands is delighted to announce the Senior General Than Shwe Poetry Competition in support of Saw Wai and Nay Phone Latt. To get the ball rolling, The ShadowLands offers two modest examples of what we are looking for – Ahem:
The person of Senior General Than Shwe
Looks like an obese chimpanzee
Has had sex with an elf
Or maybe himself
And created some monstrosity.
There once wasapersistent murmur
that General Than Shwe, that old life affirmer
was planningawedding
to give his daughterabedding
to experience what he’s done to Burma
Any further entries are more than welcome in comments.
Posted by Margo’s Maid at 5:56 PM
Boy onabike said…
Breakfast for Senior General Than Shwe
Is not accompanied by coffee
He does haveacup
And he does fill it up
But it’sapint of his own wee
Margo’s Maid said…
Outstanding, thanks BOAB!
Hard to resist when offered the opportunity to compose political limericks. Let’s see…
Hello and ahoy there, General Tan Shwe…
Stop playing with your pistol now and look at me.
So do you know who I am,
You putrid hunk of ham?
Too late to panic, I am Death,
and you shall die at the count of three!
November 23, 2008 6:31 AM
Blog link: http://margosmaid.blogspot.com/2008/11/general-than-shwe-poetry-competition.html
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေအကြောင်း စပ်ဆိုတဲ့ ကဗျာပြိုင်ပွဲတခု လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့ Margo’s Maid’s ShadowLands ရဲ့စိတ်ကူးပါ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ကဗျာကို စပ်နိုင်သလို မြန်မာဘာသာနဲ့လည်း ပြိုင်ပွဲသပ်သပ် လုပ်လို့ ဖြစ်နိုင်စရာ ရှိပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ကျဆင်းစေတယ်လို့ စွပ်စွဲခံရပြီး ထောင်ကျသွားတဲ့ “ကဗျာဆရာ စောဝေ”နဲ့ ”ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်”တို့ကို ထောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ပြောင်မြောက်တဲ့ စာပေအနုပညာ၊ မတရားမှုကို တိုက်ပွဲဝင်ရဲတဲ့ သတ္တိ၊ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့ ဆန္ဒ၊ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်လိုတဲ့ ခံယူချက်၊ အများအကျိုးအတွက် အနစ်နာခံတတ်တဲ့ ပါရမီ၊ လူထုအကြား ထိထိရောက်ရောက် လုပ်တတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကြောင့် သူတို့ကို နိုင်ငံတကာက သိရှိလာကြပါတယ်။ သူတို့ ထောင်ကျခံရတဲ့အကြောင်းလည်း နိုင်ငံတကာမှာ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်နေပါတော့တယ်။ သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုထိုက်စရာ နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုလည်း ရှာဖွေနေကြပါပြီ။
မြန်မာဘလော့ဂါတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ ဘလော့ဂ်တွေမှာ ဖိတ်ခေါ် ကဗျာပြိုင်ပွဲ၊ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွေကို အခါအားလျော်စွာ ကျင်းပပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် “အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး” လူထုနိုးကြားမှုကို ထိထိရောက်ရောက် နိုးဆော်ပေးနိုင်စရာ ရှိပါတယ်။
Posted in ကဗျာ, တပ်လှန့် နိုးဆော်သံ, Varieties in English
Tagged with ကဗျာ, သန်းရွှေ, စောဝေ, နေဘုန်းလတ်, ပြိုင်ပွဲ
Source: Email – people_power_8888@yahoo.com
စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အရေးပေါ် ဆေးကုသမှု ခံယူရန် စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်။
မြန်မာစစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ရုတ်တရက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးဝါးလာသဖြင့် အရေးပေါ် ဆေးကုသမှုခံယူရန် မနက်ဖြန် (၃-၁ဝ-၂ဝဝ၈၊ သောကြာနေ့)တွင် နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ ညအိပ်ရပ်နားပြီး (၄-၁ဝ-၂ဝဝ၈၊ စနေနေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် အထူးလေယာဉ်ဖြင့် စကာင်္ပူနိုင်ငံသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နေပြည်တော် စစ်ရုံးနှင့် နီးစပ်သော အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းရရှိပါသည်။
(သတင်းအတည်ပြုချက် ရရှိရန် ဆက်လက် စုံစမ်းလျှက် ရှိပါသည်။)
Tagged with သန်းရွှေ
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များမှ အထူး အလိုရှိနေသော တရားခံ
Tagged with တရားခံ, ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး, သန်းရွှေ
Source: Dr Aung Chun’s email
Tagged with ဂမ်ဘာရီ, သန်းရွှေ
နအဖ ခေါင်းဆောင်များကို စစ်ရာဇဝတ်မှုဖြင့် နိုင်ငံတကာခုံရုံးတင်နိုင် (DVB အင်တာဗျူး)
Tagged with စစ်ရာဇဝတ်မှု, ဆူဒန်, လုံခြုံရေးကောင်စီ, သန်းရွှေ, အိုင်စီစီ, အိုင်စီဂျေ